Imoto ye-Resin Model, Izimoto Zesimbi Yensimbi, Imodeli Yepulasitiki - Amatshe Amathathu
IPorsche 911, ekuqaleni eyayibizwa nge-901, yavela ngo-1967 futhi yayitholakala ngokulungiswa komzimba okuningi, kufaka phakathi okuhlukile kweTarga. ITarga ingathengwa ngokukhethwa kwezinjini ezine, kukhiqizwa amandla amahhashi aphakathi kuka-130 no-160 njengamanye amamodeli afakwe ochungechungeni lwango-1967.
Le modeli ifike nophahla olususekayo nesikrini sangemuva esithambile.
IPorsche 911 TARGA
Umsebenzi wethu: Imoto yangempela yazalwa ngenxa yemodeli.
Umbono wethu: Vumela amakhasimende aqhubeke nokusidumisa.
Umoya wethu: Vumela abasebenzi baqhubeke nokusebenza ngokujabula.
Ifilosofi yethu: Kuhlala kunendawo ye-WIN-WIN futhi alikho ibhizinisi elingaxoxwa ngalo.